၁၆ အကောင်းဆုံးမီးဖိုအစားထိုးများ - ကျန်းမာသောအခြားရွေးချယ်စရာအရာများ - မည်သည့်စာရွက်အတွက်မဆိုအကောင်းဆုံး Sour Cream အစားထိုး
Ree ၏အကြိုက်ဆုံး 'ယုံကြည်စိတ်ချရသော' Sunscreen အမှတ်တံဆိပ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ
ညစာအတွက် Mini Cajun ကြက်ကင်ကြော်
၁၆ အိမ်တွင်းရှိမည်သည့် Baker မဆိုအတွက်အကောင်းဆုံးအသားအစားထိုးသူ
မည်သည့်စာရွက်အတွက်မဆိုအကောင်းဆုံး Sour Cream အစားထိုး
၀၀၀ ကောင်းကင်တမန်နံပါတ် အမွှာမီးဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
Flour သီအိုရီတွင်ဤမျှရိုးရှင်းပုံရသောထိုပါဝင်ပစ္စည်းများများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အဓိကစားစရာခန်းကို item အကြောင်းအရင်းတစ်ခုအရ) ဒါပေမယ့်ဒီကနေ့မှာတော့ဂျုံမှုန့်အားလုံးဟာဂျုံတစ်မျိုးလုံး၊ gluten free၊ nut-based နဲ့အချို့မှပဲထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ မည်သည့်ဂျုံမှုန့်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်စုံဆိုင်သို့မသွားမီ၊ အကောင်းဆုံးဂျုံမှုန့်အစားထိုးသူများစာရင်းကိုအရင် ဦး ဆုံးတိုင်ပင်ပါ။ နောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မုန့်ညက်မှကြွလာသောအခါ, စဉ်းစားရန်အရာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဂျုံမှုန့်ကိုထုထည်ကြမ်းသောဂျုံမှပြုလုပ်သည်။ ဂျုံနှစ်မျိုး - မာကျောသောဂျုံ (ပရိုတိန်းနှင့်ဂလူးဝင်အမြင့်တွင်ရှိသည်) နှင့်နူးညံ့သောဂျုံ (ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသော) ရှိသည်။ ပေါင်မုန့်လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်သင်ဟာပေါင်မုန့်မှုန့်လိုပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားတဲ့မုန့်ညက်ကိုလိုချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ပရိုတင်းမပါတဲ့ဂျုံမှုန့်၊ မုန့်ချိုမှုန့်လိုမျိုးမုန့်ညက်လိုချင်တယ်။
ရုံ Goldilocks နှင့်အတူလိုပဲအလယ်၌တစ်ခုခုအမြဲရှိပါတယ် တရားမျှတ ညာဘက် (သိပ်ခက်လွန်းမပျော့မဟုတ်) ။ ဤသည်နေရာတိုင်းတွင်အမျိုးမျိုးသောဂျုံမှုန့်များပါ ၀ င်သောမုန့်ညက်ဖြစ်သည်။ လွင်ပြင်အဟောင်းကိုတောင်းဆိုသည့်မည်သည့်စာရွက်ကိုမဆိုကြည့်ရှု။ ၎င်းသည်လူအများသုံးနိုင်သည့်မုန့်ညက် (သို့မဟုတ်လူအများခေါ်သည့်ဂျုံမှုန့်) ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နာမတော်၏အဓိပ္ပာယ်အရရည်ရွယ်ထားသောမုန့်ညက်သည်သင်ကကွတ်ကီးမုန့်ဖုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ်ပီဇာကိုလုပ်တာကအသုံးပြုနိုင်တယ် ရည်ရွယ်ချက်များ ! ၎င်း၏ဘက်စုံသုံးမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်? ညံ့ဖျင်းခြင်းမရှိဘဲမုန့်ဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံချေးငှားရန်အတွက် gluten သင့်လျော်သောပမာဏကိုရရှိသည်။
ဂျုံမှုန့်အများစုကိုဂျုံမှုန့်ဟုရည်ညွှန်းသော်လည်းအခြားအဆန်များဖြစ်သော oats နှင့် rye ကဲ့သို့သောဂျုံမှုန့်များကိုလည်းကောင်း၊ ဗာဒံသီး၊ အာလူးနှင့်အုန်းသီးကဲ့သို့သောအခြားအရာများမှပြုလုပ်သည်။ အခြားမုန့်ညက်နှင့်အတူချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်မုန့်ဖုတ်ခြင်းသည်အဆင်ပြေနိုင်သော်လည်းအချို့ကိစ္စရပ်များတွင် ပို၍ ပင်ကျန်းမာနိုင်သည်။ လူများသည်သူတို့၌ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်သို့မဟုတ်အခြားအစားအစာများဖြင့်အစားထိုးသောဂျုံမှုန့်များဖြင့်ချက်ပြုတ်နေကြသည်။ ထောပတ် sabbatical ) ။ ဤမုန့်ညက်အစားထိုးကိုအသုံးပြုရန်သော့သည်၎င်းတို့အားလုံး၌ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောရလဒ်များရှိလိမ့်မည်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မုန့်ညက် - အထူးသဖြင့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ဟာပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုအတွက်အဖြူရောင်ဂျုံမှုန့်ကိုထုတ်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံစတိုးဆိုင်တွင်မုန့်ညက်မလုံလောက်မှုရှိလား၊ ဤလွယ်ကူသောဂျုံမှုန့်အစားထိုးသူများကတစ်နေ့တာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
(PS: စစ်ဆေးပါ အကောင်းဆုံးမုန့်ဖုတ်မှုန့်အစားထိုး နှင့် ဥအစားထိုး ဒီမှာ!)
ကြော်ငြာ - အောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါမုန့်အစားထိုး: ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ် Pastry မုန့် Getty Images
သန့်စင်ပြီးညံ့ဖျင်းသောညံ့ဖျင်းသောဂျုံမှုန့်နှင့်မတူဘဲဂျုံမှုန့်လုံးသည်ဂျုံစေ့နှင့်ဖွဲနုများကိုနဂိုအတိုင်းထားခြင်းအားဖြင့်အာဟာရနှင့်အမျှင်များကိုထိန်းသိမ်းသည်။ ၎င်းသည်ဂျုံနီမှပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်မှောင်မဲ၊ ကြမ်းတမ်းသောအရောင်နှင့်အရသာရှိသောအရသာကိုပေးသည်။ သို့သော် ၁၀၀% ဂျုံမှုန့်ဖြင့်မုန့်ဖုတ်သောအခါသတိထားပါ။ သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုပိုမိုခြောက်သွေ့စေသည်။ အဲဒီအစားဂျုံမှုန့်တစ်ဝက်၊
အချို့သောစတိုးဆိုင်များတွင်အဖြူရောင်ဂျုံမှုန့်များလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဒါဟာအစားအနီအစားဂျုံဖြူကနေလုပ်ပေမယ့်နေဆဲတပြင်လုံးကိုဂျုံကဲ့သို့အလားတူ nutty အရသာရှိပါတယ်။
၅ Flour အစားထိုး: ဗာဒံသီး
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဗာဒံမုန့်ညက်ဟုခေါ်သည့်ဤအခွံမာသီးအခြေခံမုန့်ညက်သည်မြေသားစိမ်းကုန်ကြမ်းဗာဒံသီးမှပြုလုပ်သည် ၎င်းသည်ဖိုင်ဘာထဲတွင်မြင့်မားပြီး၎င်းသည် gluten free၊ paleo-friendly နှင့် carbs နည်းသည်။ ဗာဒံမှုန့်တွင်ကိတ်မုန့်များဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည့် gluten များမပါ ၀ င်သောကြောင့် AP ဂျုံမှုန့်အစားအစားထိုးအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ စာရွက်တွင်ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်သို့မဟုတ်သင်ကြက်ကြော်ကြော်များကိုနင်းလျှင်၊ များသောအားဖြင့်ဗာဒံသီးကိုလဲလှယ်နိုင်သည်။
၆ Flour အစားထိုး: Oat မုန့် Getty Images
Gluten-free ဂျုံမှုန့်ကိုမြေသြဇာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒါဟာ pancakes, waffles နှင့်အကြီးအအရသာအရသာအနည်းငယ်အာဟာရအရသာရှိပါတယ်။ သင်စတိုးဆိုင်၌မည်သည့်မုန့်ညက်ကိုမျှရှာမတွေ့ပါကလှိမ့်ထွက်သောအိတ်တစ်ထုပ်ကိုရောစပ်။ သို့မဟုတ်အစားအစာပရိုဆက်ဆာတွင်သင်အမှုန့်အနံ၊ ဂျုံမှုန့်ကဲ့သို့သောစက္ကူများမပေါ်မီစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင် zap ယူပါ။ Oats မှဖိုင်ဘာသည်၎င်းကို AP ဂျုံမှုန့်ဖြင့်လဲလှယ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၇ Flour အစားထိုး: Millet Flour Getty Images
နောက်ထပ် gluten-free option! ဤဂျုံမှုန့်သည်ဖိုင်ဘာနှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်အပါအ ၀ င်အာဟာရတစ်တန်အပါအ ၀ င်အလွန်သေးငယ်သောရှေးကျသောစပါးမှရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များအတွက်မုန့်ဖုတ်သောအခါပြောင်းဆန်ဂျုံမှုန့်နှင့် AP ဂျုံမှုန့်ကို အသုံးပြု၍ မလိုအပ်ပါ။
၈ Flour အစားထိုး: ဆန်မုန့် Getty Images
ဤမုန့်ညက်သည်အဖြူနှင့်အညိုရောင်ဆန်အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောမုန့်ညက်အစားထိုးစေသည်; သို့သော်၎င်းသည်အနည်းငယ် gritty ဖြစ်လေ့ရှိသောကြောင့်အမည်တပ်ထားသော“ ထုထည်မြေပြင်” ကိုရှာပါ။ ထမင်းပူချိန်မှာဖြစ်စေ၊ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်၎င်း၏အနည်းငယ်အာဟာရအရသာများအတွက်အညိုရောင်ဆန်ဂျုံမှုန့်ကြိုက်တယ်။
၉ Flour အစားထိုး: အုန်းသီး Getty Images
အားလုံး keto ချစ်သူများ Calling! အုန်းမှုန့်သည်အုန်းသီးခြောက်မှပြုလုပ်ထားသောအမျှင်ဓာတ်၊ ကာဗွန်ဓာတ်နည်းသော၊ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအပူပိုင်းအရသာရှိပြီးထို့ကြောင့်သင်၏မုန့်ဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုသိပ်သည်းစေနိုင်သောချက်ပြုတ်မှုအားလုံးအတွက်မစုံလင်ပါ။ ၎င်းကိုအခြားမုန့်ညက်များနှင့်ပေါင်းပြီးအသုံးပြုပါကအပိုအရည်သို့မဟုတ်အဆီထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
၁၀ Flour အစားထိုး: Buckwheat Flour Getty Images
အရူးမခံပါနဲ့! ဂျုံမှုန့်သည်ဂျုံမှမဟုတ်ဘဲ gluten-free ဖြစ်သော buckwheat မုန်လာဥမှပြုလုပ်သည်။ ဒါဟာချောကလက် chip ကို pancakes သို့မဟုတ် muffins လုပ်သည့်အခါအကောင်းဆုံး AP မုန့်ညက်အစားထိုးအဖြစ်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုတဲ့အာဟာရအရသာရှိပါတယ်။ မင်းသိလား Soba ခေါက်ဆွဲ ဂျုံဂျုံမှုန့်မှပြုလုပ်တာလား
တကျိပ်တပါး Flour အစားထိုး: စာလုံးပေါင်း Flour Getty Images
သင်တို့သည်မုန့်ညက်စာလုံးပေါင်းပေးသောအရသာယုံကြည်မည်မဟုတ်! ဒါဟာ All- ရည်ရွယ်ချက်အလားတူပရိုတိန်းအကြောင်းအရာရှိပြီး, ဒါပေမယ့်သူကချောကလက် chip ကို cookies တွေကိုအတွက်အရသာင်တဲ့ nutty အရသာရှိပါတယ်တဲ့ဂျုံမှုန့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ သင်က AP ခွက်အစားခွက်အတွက်၎င်းခွက်ကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင့်ဘက်ထရီတွင်အစိုဓာတ်လုံလောက်စွာရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
၁၂ Flour အစားထိုး: Chickpea Flour Getty Images
Chickpeas (သို့မဟုတ် Garbanzo beans) သည်ပရိုတိန်းနှင့်အမျှင်များများပြားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စူပါဝိုင်များပြားစေသည်။ အဲဒီမှာအများကြီးရှိပေမယ့်သင်нуပဲကနေလုပ်ဂျုံမှုန့်လည်းမရှိကိုသိသလား ဒါဟာအရသာနှင့်ချိုမြိန်ဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအဘို့ကြီးသောပါပဲ။
၁၃ Flour အစားထိုး: Amaranth Flour
ဂျုံထက်ပရိုတိန်းများများစားစားဖြင့်အာမရန့်ဂျုံသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊ အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နိုင်သည် (အထူးသဖြင့် scones နှင့် pancakes) ။
၁၄ Flour အစားထိုး: အာလူးပန်း Getty Images
အာလူးဂျုံမှုန့်ကိုအာလူးတုံးလုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအခြောက်ခံသည် (မြေသားအာဟာရဓာတ်နှင့်ရောထွေးရန်မလို) ။ ၎င်းသည်အစိုဓာတ်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဟင်းချိုနှင့်ဝက်အူချောင်းများအတွက်အထူများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အာလူးအမှုန့်နှင့်အတူဖုတ်ခြင်းငှါကြွလာသောအခါ, ကတောင်းဆိုသောချက်ပြုတ်နည်းများကပ်ရန်အကောင်းဆုံး။
ဆယ့်ငါး Flour အစားထိုး: ကောက် Flour Getty Images
ကောက်ဂျုံမှုန့်သည်အလင်းမှအမဲမှအညွန့်အထိအနည်းငယ်ရှိပြီးအရသာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သင့်ဒေသဆိုင်ရှိစားနပ်ရိက္ခာတွင်ကောက်ပဲသီးနှံအသားညှပ်ပေါင်မုန့်မှအရသာကိုသင်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ကောက်ဂျုံမှုန့်တွင် gluten ပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းတွင်မပါရှိပါက၎င်းကိုမြင့်တက်စေရန်အခြားမုန့်ညက်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကောက်ဂျုံမှုန့်များများများလေလေ၊
၁၆ Flour အစားထိုး: Quinoa မုန့် Getty Images
Ree ကဒီအဆာကိုအခြေခံတဲ့ quinoa ကိုအသုံးပြုတာကိုကြိုက်ပေမယ့် quinoa ကိုဂျုံမှုန့်အဖြစ်ထည့်လိုက်ရင်အညိုရောင်နဲ့ပေါင်မုန့်တွေအတွက်အာဟာရအရသာထည့်ဖို့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကို third party မှဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းထားပြီးသုံးစွဲသူများရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကူညီဖို့ဒီစာမျက်နှာကိုတင်သွင်းထားတယ်။ piano.io တွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ဆင်တူသောအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကြော်ငြာခြင်း - အောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ
ဟယ်လို။ ကျွန်တော့်နာမည်က Henrietta ပါ။
ဒီ Peach Galette သည်လူအစုအဝေးအတွက်လုံလောက်ပါတယ်
Chipotle Bacon တူရကီလျှော
မွန်းတည့် Frost ကိုဘယ်လို
သင်၏ Big Day တွင် 50Th Birthday Party အကြံဥာဏ်များ
Walmart ကိုဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာဖွင့်ထားပါသလား။
သံပုရာ Basil ပုစွန် Risotto
1200 Angel နံပါတ်- အဓိပ္ပါယ်နှင့် သင်္ကေတ
Disney ပရိသတ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဘွဲ့လက်ဆောင်များ
သစ်သီးဝလံတွေထဲမှာ Snowman တစ်ယောက်ပုန်းနေတယ်။ သင်တွေ့နိုင်သလော
အားလုံး - အမေရိကန်အစားအစာပဟေ!ိ!
အားလုံးသောအမေရိကန်အစားအစာ - အဖြေများနှင့်ဆုများ!
ဆယ်ကျော်သက်များမှ အမေများနေ့ လက်ဆောင်များ
4-H ခေါင်းဆောင်အတွက် လက်ဆောင် အကြံဉာဏ် 20
Saint dwynwen ဆုတောင်း
ဆိုဖာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
အတိုကောက်အတွက် ထောပတ်ကို အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
မိသားစုအတွက် လွယ်ကူသော ဟင်းချက်နည်း
Hoverboard အသုံးပြုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် 20 နှင့် 2017 ရှိ Wannabe Hoverboard အသုံးပြုသူများ
ပြီးတော့အဲဒီမှာ Josh ရှိပါတယ်
Cheesy Waffle Hash Brown နှင့်အတူနံရံကင်
ဤမြေပုံသည်ပြည်နယ်တိုင်း၌လူကြိုက်အများဆုံး Valentine Day Candy ကိုပြသသည်